Updated: 2016-03-17 16:10
အာမခု စ ရှိမိုဒ အွန်းဆန်း
အာမခစ ရှိ မိုဂျိမား တစ် ခု ထဲ သော အွန်း ဆန်း ဖြစ် ပြီး တော့ ၊ သာ ယာ လှ ပ တဲ့ ပတ် ၀န်း ကျင် မှာ တည် ရှိ တဲ့ တိတ် ဆိတ် ညိမ် သတ် တဲ့ ရေ ပူ စမ်း ဒေသလေးး တစ် ခု ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ဗျိုင်း ဖြူ ကြီး က ဒါဏ် ရာ ရ...
Updated: 2016-03-17 15:59
အီဘုစု ခိ ရဲ့ မှန်ကန် တဲ့ အသုံး ပြု ပုံ
【အမှတ်စဉ် ၁ မစိမ် ခင် ရေတစ်ခွက် ၀၀သောက်သုံး】 ချွေးထွက် လွန် ခြင်း အတွက် ရေဓါတ် ကုန် ဆုံး ခြင်း အကာအကွယ်။ 【အမှတ် ၂ ရေလောင်း（ခဘုရိယု）】 ကိုယ်က အညစ်ကျေး တို့ ကို ရေလောင်းချ၊ အပူချိန် က...
Updated: 2016-03-17 15:36
ဆေးဖက် ၀င် ရေပူ ဆို ပြီး တော့ အယ် ဒို ခောတ် မှာ ပေါ်ပေါက်လာ ပြီး အဲ့ ဒီ တုန်း က ကျောက် ဆိုင် တို့ ကို အဆွဲ ပြု ပြီး ဟော့တာ ရေ ပူစမ်း ဆို ပြီး အမည် တွင် ခဲ့ ပါ တယ်။ ကြွယ် ၀လှ တဲ့ ရေပူစမ် တွေ န...
Updated: 2016-03-17 15:29
ဟာ မ ၀ ခိ အွန်း ဆန်း
ဘဲ့ ပု အွန်းဆန်း မွေး ဖွား ရာ နေရာ ကမ်းခြေ ကနေ အွန်း ဆန်း က အငွေ့ တွေ ထွက်နေတဲ့ ပုံ ကနေ ( ဟာမ၀ ခိ ) ဆို ပြီး နာ မည် တွင် ခဲ့ ပါတယ်။ ခါမခူရာ ကနဦး မှာ ချောမိရဟာတ ရဲ့ တည် ထောင် ချင်း...
Updated: 2016-03-17 15:12
ဟီတိုရော ရှိ အွန်းဆန်း ရဲ့ ဖြစ်ပုံ လာ ပုံ က မဲဂျိ ၄၃ နှစ် ( ၁၉၁၀) မှာ ဖြစ် ပြီး ၊ အခု ဆို ရင် နေရာ ၅၀လောက် မှာ ရေပူစမ်း ထွက် နေပါ တယ်။ အရည် အသွေး မှာ ဆို ရင် အယ်ရီကာလီကာဗွန် ဓါ တ် အနည်း င...
Updated: 2016-03-17 14:58
ဘဲ့ပု ဟတ်ချိ ယု နဲ့ ပက် သက် ပြီးတော့
ဘဲ့ပု ဟတ်ချိ ယု ဆို တာ က မြို့ ထဲ မှာ ၈ ခု လောက် ရှိ တဲ့ ကိုယ်စားပြု ရေပူစမ်း နယ်မြေတွေ ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီနေ ရာတွေဟာ တမူ ထူး ခြား တယ် ဆို ပြီး တော့ ဂုဏ် ယူ ပြီး ၊ ရှေး အကျ ဆုံး က ၈ရာ စု နှစ် ကို အစပြု...
Updated: 2016-03-17 13:45
၀ါရဘုခိ ( ရေငွေ့ ပန်းလေး ) တွေ ကနေ ထွက် လာ တဲ့ အဖြူရောင် အခိုး အငွေ့ လေး တွေ ကတောင် ပျော်ရွှင် စေပါတယ်။ အယ် ဒို ခောတ် က ( အာခိရဘန်း) ရဲ့ အရည် အသွေး ရွေးကောက် ခံ စာရင်း မှာ တစ် နိုင် ငံ လုံး ပ ထမရခဲ့ြ...
Updated: 2016-03-17 13:35
တာမန အွန်းဆန်း ( ရေပူစမ်း)
တာမနရေပူစမ်းဟာ ဟိခိနိုး ဘုရားကျောင်း ရဲ့ အနီး နား မှာ ရှိတဲ့ မြို့ ထဲ မှာ ရှိ ပြီး တော့ဒူလာ၊ ခါးနာ တာ တို့ ကို ပျောက် ကင်း တဲ့ အကြိုး ရှိ ပြီး တော့ အယ်ကာလိုင်း ဓါတ် တွေ နဲ့ရေဒီယမ်း တို့ ပါ ၀င် တ...
Updated: 2016-03-17 13:22
အိဘုစုခိ အွန်းဆန်း ( သဲ ပူစိမ် အတွေ့အကြုံ)
ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ ရှား ပါး လှ တဲ့ သဲ အပူ နဲ့ စိမ် ရတဲ့ ကျန်းမာရေ အကျိုး ရလဒါတွေနဲ့ ၊ ပိတ် ချင်သူတွေ ၊ လှ ချင် သူ တွေ အတွက် အကျိုး သက်ရောက် မှု ရှိ တဲ့ အတွက် မိန်း ကလေး တွေ ကြား မှာ ကော အခြား အသက် အရွ...
Updated: 2016-03-16 16:57
ယုဖုအင်းရေပူစမ်း ရေပူစမ်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အိုအိတတွင် ဘက်ပုရေပူစမ်းနဲ့ ယုဖုအင်းရေပူစမ်းတွေဟာ အလွန်နာမည်ကြီးပါတယ်။ စိတ်လက်အပန်းဖြေနိုင်တဲ့ကျယ်ပြန့်သောနေရာများလည်းရှိပါတယ်။ ပိတ်ရက်ရှည်များတွင်...